ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ထောင်ဒဏ်ကြွေးကျန်နဲ့ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင် (ရုပ်သံ)
ထောင်ဒဏ်ကြွေးကျန်နဲ့ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင် (ရုပ်သံ)
ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်နဲ့ ကျင့်ထုံးဥပဒေ ၄ဝ၁(၁)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 11:37 AM
စစ်တက္ကသိုလ်က စနစ်တကျ မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ဗကနေမျိုးဇင်ရဲ့ စရိုက်ကို ကြိုက်သူရှိမယ်၊ မကြိုက်တဲ့သူလည်း ရှိမယ်။ စုန်းပြူးလို့ ပြောချင်သူတွေကလည်း ပြောမှာပေါ့။ လွတ်လပ်စွာ ထင်မြင်ယူဆပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒါက လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ခြင်းရဲ့ မွေးရာပါ ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။
ကြိုက်ခြင်း၊ မကြိုက်ခြင်းထက် တိုင်းပြည်က ချမှတ်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်အနှစ်သာရနဲ့ သွေဖီကင်းလွတ်နေတဲ့ အခုလိုအမူအကျင့် ဖြစ်စဉ်မျိုးကိုတော့... ဒီမိုကရေစီထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် မြင်ချင်၊ တွေ့ချင်သူ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ သဘောမတူဘူး။ မလိုလားဘူး။
ဥပဒေပုဒ်မအကြောင်းပြချက်တွေ ဘယ်လိုပဲ ရှိနေနေ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ တရားမျှတမှုမရှိဘဲ အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျ ညစ်ပတ်ခံရတယ်ဆိုတာ ပုံမှန်စိတ်အခြေအနေ ရှိသူတိုင်း ခံစားနားလည်နိုင်တယ်။ လွတ်လပ်စွာ စိတ်ဆန္ဒတွေကို ဖော်ထုတ်ပြောဆိုခွင့်ရှိရင် လူအယောက် ၁၀၀မှာ ၉၉ ယောက်က ဒီကိစ္စဟာ မတရားဘူးလို့ ပြောကြလိမ့်မယ်။
ရဲတွေကို လာဘ်စားတယ်လို့ ပြောဆိုစွပ်စွဲတာ မှားနေတယ်ဆိုရင်လည်း လာဘ်မစားကြောင်း သက်သေများနဲ့ ရှင်းလင်းစွာ ပြည်သူကို ပြန်လည်ချပြ ရှင်းလင်းသင့်တယ်။ အဲလို ချပြပြီးမှ စွပ်စွဲပြောဆိုသူ မှားယွင်းနေတဲ့အတွက် အသရေဖျက်မှုနဲ့ တရားစွဲဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်း ဆွဲပေါ့။ ထောင်ချဖို့အထိ ထိုက်တန်တယ်လို့ လိပ်ပြာလုံ ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်လည်း ဥပဒေနဲ့အညီ ဆိုတာကြီးနဲ့ လုပ်ကြပေါ့။ အခုတော့ ငါ့လာမထိနဲ့ ထိရင်ဒီလို ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး အားလုံးကို ပုံစံပေး ချိန်းချောက်နေသလိုပါပဲ။
မြန်မာပြည် သည် ဒို. ဘဲပိုင်တဲ. တိုင်းပြည် ဆိုတဲ. သူတွေ
အုပ်စု ကို သွားထိခိုက်အောင် လုပ်တာကိုး ........ ။
nga ba..your right.
တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ နိုင့်ငံ ဝန်ထမ်းရင်ဘတ်ထဲ ဝင်ကြည့်ပေးပါ။
နေရာတခါ ပါတဲ့ ပွကြီးသီအိုရီ ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူး
စောင့်ကြည့်နေတာ မှားတာနဲ့ ဥပဒေကို အသက်သွင်းပြီးတွယ်လိမ့်မယ်
၁။ အချက်အလက်အထောက်အထားကို အသံ ရုပ် စသည်ဖြင့် ရအောင်စု
၂။ ဖွတော့မယ်ဆိုရင် ဥ ပဒေအရ ကိုယ်ညှိနိုင်သလား
၃။ ကိုယ်နောက်က ဘယ်သူတွေပါမှာလဲ
ဒါတွေ သုံးသပ်ပြီးမှ လှုပ်ရှားသင့်တယ် ညီလေး ကံကောင်းပါစေ။